एप्पलले गर्भपात केन्द्रहरूको खोजी गरेर सिरी समस्या "फिक्स" गर्छ आईफोन समाचार
एप्पलले 'गर्भधारण केन्द्रहरू' खोज्दै सिरि समस्या फिक्स गर्दछ
गर्भपतनको मुद्दा सधैं सबै देशहरूमा विवादास्पद भएको छ। आजसम्म यो यस्तै नै छ र धेरै सरकारहरू पनि छन् प्रत्येक चोटि तिनीहरू सत्तामा आउँदा कानूनहरू यसलाई निषेध गर्न वा यसलाई सजिलो बनाउन परिमार्जन गर्छन्। वास्तवमा आईफोनमा हामी यो राम्रो वा नराम्रो हो भनेर जाँच्ने छैनौं, हामी आफैलाई एप्पलको संसारमा समर्पित गर्छौं र हामी यही कुरा गर्ने छौं।
धेरै वर्षदेखि यस्तो देखिन्छ कि सिरीले यसमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे र हरेक पटक गर्भपतन केन्द्रहरूको बारेमा सोधिन्थ्यो जहिले पनि दत्तक केन्द्रहरूमा पुनर्निर्देशित। २०११ मा आईफोन s एस मार्फत मार्केटमा आएको हुनाले यो भइरहेको छ।
यो उत्सुकतापूर्ण छ कि प्रत्येक पटक सीरीलाई गर्भपतन केन्द्रको लागि सोधिएको छ, यो एक दत्तक केन्द्रमा पठाइनेछ, अनुरोध गरिएको भन्दा ठीक उल्टो। यसको सुरूवात पछि, एप्पलको दावी छ कि यसले खोज एल्गोरिथ्मलाई सुधार गर्दैछ यस असफलतालाई सुल्झाउने प्रयास गर्न जसमा गलत जानकारी प्रस्तुत गरियो जुन प्रयोगकर्ताहरूका मागहरूसँग केही गर्न सक्दैन।
लोरेन हिमियाक, सी परिवर्तनको कार्यकारी, भन्छन कि एप्पलले यो जानकारीमा प्रस्ताव गरेको परिणामहरू अक्षम छन्। यसले यो पुष्टि पनि गर्छ कि देशभरि त्यहाँ महिलाहरू छन् जसले गर्भपतनको बिरूद्धमा आएका मानिसबाट सतावट भोग्छन्, र जसले यस निर्णयले प्रभावित व्यक्तिहरूको विचारलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दछन्।
समुद्री परिवर्तन एक नाफा नकमाउने संस्था हो धेरै महिलाले गर्भपतन गर्न चाहेको खण्डमा सामना गर्ने कलंकको सामना गर्न कोशिस गर्दछन्। हिमियाकले सिरीको मुद्दा सिधा एप्पललाई रिपोर्ट गरे र पत्ता लगाए पछि उनीहरूले यस मुद्दालाई सुधार्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
समाचार प्रकाशित गर्ने पहिलो माध्यम नोभेम्बर २०११ मा द न्यू योर्क टाइम्स थियो र कम्पनीको एक प्रतिनिधिले तुरुन्तै भन्यो परिणामहरू जानाजानी सुधारिएको थिएन र भने कि एप्पल पहिले नै यो समस्या समाधान गर्न कोशिस गर्दै थिए। तर लगभग years वर्ष पछि अप्प्पलमा उनीहरूले यसलाई समाधान गर्न चाहेनन्, किनभने मलाई शंका छ कि यस जस्तो समस्या समाधान गर्न एप्पलले लामो समय लिनेछ।
यस क्षणबाट, र यस लेखको मालिकको रूपमा, जब हामी मेडिकल सेन्टरहरूको बारेमा जानकारी अनुरोध गर्दछौं जहाँ गर्भपतन गर्न सकिन्छ, सिरी सही रिपोर्ट गर्दछ.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » हाम्रो बारेमा » एप्पलले 'गर्भधारण केन्द्रहरू' खोज्दै सिरि समस्या फिक्स गर्दछ
दा बकवास? तर त्यसो भए यो समाधान भयो कि छैन? हाहा! यो घृणित हुनुको लागि होइन, तर यो यो हो कि यस बाहेक 'उनीहरू पहिले नै यो समस्या समाधान गर्न कोशिस गर्दै थिए। तर लगभग five वर्ष पछि अप्प्पलमा उनीहरूले समस्या समाधान गर्न चाहेनन्, किनकि म समस्या समाधान गर्न धेरै शंका गर्दछु - pls, तपाईले तीन चोटि दोहोर्याउनुभएको छ 'समस्या समाधान गर्नुहोस्' -, तपाईले के भन्नुहुन्न हामी के आयौं हामीलाई hahaha बारे मा सूचित गर्न। सिरी अहिले के भनिरहेछ?
क्यरोलाई जवाफ दिनुहोस्
अब यो केन्द्र मा प्रयोगकर्ता को नजिकै गर्भपात गर्न को लागी जानकारी प्रदान गर्दछ, शीर्षकले भन्छ।
भोलेप, यसलाई सम्पादन गर्न र मलाई जवाफ दिन तपाईंको समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद। यो सराहना गरियो :)!
जब तपाईं सही हुनुहुन्छ तपाईं हुनुहुन्छ। हामी मानव हौं र हामी गल्ती गर्न सक्छौं।
गर्भपात अपराध, अवधि हो।
र जब महिलालाई बलात्कार गरियो?
यो कहिले अपराध हो?
भ्रुणलाई कहिले मानव मानिन्छ?
यदि मैले झिकें भने, के म अपराध गर्दैछु? यो भविष्यमा बच्चा हुन सक्छ अण्डाहरूलाई हिर्काउँदा
महिलाहरूलाई आफ्नो शरीरमा निर्णय गर्न दिनुहोस्
Tonelo33 लाई जवाफ दिनुहोस्
क्षणको गल्तीहरू देखेर छक्क पर्छन्, जसले चरम केसलाई एक घृणित कार्यलाई जायज ठहराउन प्रयोग गर्दछ। यदि यस्तो लाग्छ कि चोरीलाई जायज ठान्नुहुन्छ, हामी उदाहरणको रूपमा लिन्छौं जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई खुवाउन चोरी गर्दछ।
र जब म्याद आउँछ म प्रश्न फिर्ता गर्छु। यो कहिले मानव हो र यो एक गर्भ कहाँ हुन्छ? सीमा कसले तय गर्छ? तिम्रो? के म उसलाई उसको आमाको गर्भमा मार्न सक्छु? किन ऊ एक पटक जन्मेको छैन? वास्तविकता यो हो कि तपाईं वा अरू कसैले पनि त्यो सीमा तोक्न सक्दैन, त्यसैले न त तपाईं न अरू कोहीले गर्भको भित्र वा बाहिर यो मार्ने बीचमा भिन्नता देख्न सक्नुहुनेछ।
ए, यदि तपाईं रद्दीटोकरीमा स्याउ फ्याँक्नुहुन्छ भने के हुन्छ? हेर, त्यो स्याउले यसलाई खान सक्दछ र शुक्राणुमा परिणत हुन्छ, जुन फलमा अण्डा हुन्छ। अझै अर्को समर्थक मृत्यु बुलशिट।
र अन्तमा "उसको शरीर" को सानो वाक्यांश, धेरै राम्ररी बुझेको बकवास। यो उनको शरीर होइन, यो उनको बाहिरको व्यक्तिको हो।
तपाईं थोरै विश्लेषण प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्न।
सेप्टेम्बरमा जवाफ दिनुहोस्
म सुडशेललाई शर्त लगाउँछु जसले भर्खरको पोस्ट गरे मानिस हो। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? भाग्यवस, विश्वका लगभग सबै देशहरूमा गर्भपातलाई निषेध गरिएको छ (केही असभ्य र प्रागैतिहासिक बाहेक), त्यसैले "अपराध" को कुरा गर्नु भनेको यस्तो प्रश्न हो जुन अहिले पूर्ण रूपमा प्रश्न बाहिर छ। एक रद्द गर्न चाहँदैन कि, त्यसो भए यो गर्दैन। कसैले उनलाई त्यसो गर्न बाध्य तुल्याउँदैन, न त उनी उनलाई धर्मपुत्र वा कुनै पनि जो कोहीले उनलाई दिने निर्णयले उनलाई इन्साफ गर्छ। त्यसोभए अरूसँग स्वतन्त्रता र अधिकारहरूको सन्दर्भमा निर्णय गर्नेसँग गडबड नगर्नुहोस्। आफ्नो मान अनुसार न्याय नगर्नुहोस्। तपाईं सत्यका मालिक हुनुहुन्न।
ड्रसलाई जवाफ दिनुहोस्
सबै भन्दा पहिले, म के चाहन्छु मा प्रवेश र म के चाहान्छ न्याय गर्न। न त तपाईं न अरू कसैले मलाई के म भन्न सक्छु र म के भन्न सक्छु। म चोरी गर्नेहरूलाई मार्नेलाई म इन्साफको रूपमा अपमान गर्दछु। र तपाईं कसैलाई गर्भपात विरुद्धको लागि प्रागैतिहासिकको रूपमा खारेज नगर्नुहोस्, यो अधिक हराउनेछ। हुनसक्छ एक जसले हामीलाई विगतको समयमा फर्काउँदछ जहाँ हत्यालाई अति स्वप्नवत तर्क र अन्तको साथ न्यायिक ठहराइएको हुन्छ तपाईं जस्तो व्यक्तिहरू। स्वतन्त्रता र अधिकारहरूको अन्त्य हुन्छ जहाँ अरूहरूको सुरू हुन्छ र तपाई एक पतित समाजको अर्को उदाहरण हो, व्यक्तिहरूको बनि रहेको जो उनीहरूको सोचाइलाई उनीहरूको अभिनयको तरीकामा लगातार ढाल्छ, कुनै सिद्धान्त वा नैतिकता बिना।
परिवर्तनको बतास चलिरहेको छ र, सौभाग्यवश, मान्छे तपाईलाई जस्तो लाग्छ एक तुच्छ संख्या हो। तपाइँको तर्कहरु अब पनी पकड छैन। केवल एक जसले गर्भपातलाई अपराध हो भनेर नियम दिन सक्दछन् न्यायाधीशहरू। तर जानुहोस् आज संसारमा कतिवटा गर्भपात प्रमाणहरू छन्। जहाँसम्म यो दण्ड भएको देशहरुमा पनि होइन (worldwide वा3विश्वव्यापी, कुनै अधिक) यो गर्भपतनको सजाय होईन। भाग्यवस, विश्वको विकास हुन्छ र यी छलफलहरू, धेरै तातो भए पनि, अब अर्थ लाग्दैन।4वा9pelagatos को लागी जो तपाइँ जस्तो लाग्छ, यो ऊर्जा लाई हराउन लायक छैन
के तपाइँ आफ्नो म्याकमा आईओएस .9.3 ..XNUMX मा नाईट शिफ्ट प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ? हामी कसरी देखाउँछौं
टेस्लाले एप्पलको ए-श्रृंखला प्रोसेसर लाइनको अग्रगामी नियुक्त गर्दछ